Published April 3, 2020 at 8:07 PM CDT
U doodaha naafada deegaanka ayaa ka codsanaya Guddoomiyaha Gobolka inuu soo saaro amar “meel ku meel yaal” sidoo kale.
Don Dew waa Agaasimaha Fulinta Xarunta Kheyraadka Naafada ee Siouxland.
Dew oo ay weheliyaan xubno kale oo ka tirsan Shabakadda Nolosha Madaxa-bannaan ee Iowa ayaa warqad u diray Guddoomiyaha toddobaadkan iyagoo ku boorinaya iyada inay tallaabo dheeri ah qaaddo markaa dadka u sheegto inay gurigooda joogaan.
Shabakadda ayaa sidoo kale u sheegtay Guddoomiyaha Gobolka haddii sahayda caafimaad ee loo baahan yahay in loo qaybiyo ay ka soo horjeeddo sharciga in la takooro dadka naafada ah.
Dew wuxuu yiri waxaa muhiim ah in dadku gurigooda joogaan si ay u joojiyaan fiditaanka fayraska dadka nugul.
Nebraska Gov. Pete Ricketts waxay difaacaysaa diidmadiisa in la soo saaro amarka joogitaanka-guriga ee deggeneyaasha.
Wuxuu ku dooday in aysan muhiim aheyn in kasta oo 40 gudoomiyeyaal kale ay sidaa yeeleen si iskuday looga ilaaliyo in cudurka cusub ee coronavirus uusan faafin.
Layoffs waxaa laga sugayaa Hard Rock Hotel iyo Casino ka dib markii taliyaha uu kordhiyay xiritaanka kaararka casriga illaa inta harsan bisha.
Madaxweyne ku xigeenka Hard Rock ee hawlgallada ayaa sheegaya in tallaabada cusub ay kicin doonto shaqo ka fadhiisinta laga bilaabo Abriil 8-deeda.
Kulliyadda Western Iowa Tech Community College waxay u sii xirnaan doontaa dadweynaha inta ka hartay simistarka.
Taas waxaa ku jira dhammaan xarumihii ku yaal Sioux City, Cherokee iyo Denison. Waxaa intaa dheer, dhammaan dhacdooyinka waa la kansalay illaa May 14-keeda.
Ardaydu waxay ku sii wadi doonaan shaqadooda koorsada qadka tooska ah ee hoyga ardayda waxeyna u furan yihiin ardeyda raba inay kusii nagaadaan dhismaha iskuulka iyadoo la bixinayo.
Qalin-jabinta guga waxay udhacdaa gebi ahaanba.
Local NewsLocalIowaNebraskaSouth DakotaGovernor Kim ReynoldsGovernornewsCoronavirusCOVID-19Somali
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa ka warbixineysa 73 kiis oo dheeraad ah oo ah COVID-19 Talaadada, taasoo guud ahaan gobolka ka dhigeysa 497…
Saraakiisha caafimaadka Iowa ayaa sheegaya in kiisaska cudurka 'coonavirus' Iowa ay kor u kacday 52, tirada guud ahaan gobolka oo dhan ka dhigaysa…
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo sheegaysa 66 kale oo Iowan ah oo laga helay cudurka 'coronavirus' laba kalena waa dhinteen.Waxaa jira…